बुर्ज खलिफाभन्दा अग्लो भवन अब मलेसियामा ? – Nepali online news portal
बुर्ज खलिफाभन्दा अग्लो भवन अब मलेसियामा ?
२३ पुस २०७८, शुक्रबार २२:२० January 7, 2022 पाथिभरा संवाददाता
काठमाडौं। दुवईको आकर्षणको मुख्य केन्द्र बनेको बुर्ज खलिफालाई टक्कर दिने संसारकै अर्को भवन मलेसियामा बनेको छ ।
बुर्ज खलिफालाई चुनौति दिने अर्को भवन तथा विश्वमा अझै कतैपनि बनेको छैन । तर बुर्ज खलिफापछि संसारको दोश्रो अग्लो भवन हुनका लागि चाहीँ तिव्र प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । यसैक्रममा संसारको दोश्रो अग्लो भवन मलेसियामा बनेको छ ।
हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको उक्त भवन यो वर्षको अन्त्यसम्ममा तयार हुने बताइएको छ । यो मलेसियाली भवनले चीनमा रहेको सांघाई टावरलाई पछि पार्नेछ । यसअघिसम्म संसारको दोश्रो अग्लो भवनको रुपमा रहेको सांघाई टावरको उचाइँ २०७३ फिट छ जुन अब तेश्रो नम्बरमा झरेको छ ।
मलेसियामा निर्माणाधीन संसारको दोश्रो अग्लो भवनको नाम ःभचमभपब ११८ हो । क्वालालाम्पुरमा रहेको यो भवनको उचाइँ २२ सय २७ फिट अर्थात् ६७८।९ मिटर रहेको छ र यसमा १ सय १८ वटा तल्ला हुनेछन् । यो भवनको डिजाइन अस्ट्रेलियन कम्पनी फेन्डर काटसालिडिसले गरेको हो ।
स्मरण रहोस् बुर्ज खलिफाको डिजाइनर एड्रियन स्मिथले गरेका हुन् भने सांघाई टावरको डिजाइन गेन्स्लर कम्पनीले गरेको हो ।
यो भवनको नाम Mardeka एक इण्डोनेसियाली तथा मलाय भाषाको शव्द हो, जसको अर्थ स्वतन्त्रता भन्ने हुन्छ । यो भवनमा एकसाथ ३ हजार मानिस प्रवेश गर्न सक्दछन । स्लिक डिजाइनमा रहेको यो भवनमा काँचका क्रिकोणीय प्यानल लगाइएको छ । उक्त आकारले मलेसियाको परम्परागत कला तथा क्राफ्टलाई दर्शाउँछ ।
३१ लाख वर्गफिट क्षेत्रफलमा फैलिएको यो भवनको आधा हिस्सा कार्यालयहरुलाई भाडामा दिइनेछ । यसभित्र मल, मस्जिद, पार्क तथा होटल समेत हुनेछ । साथै यसमा दक्षिण पूर्वी एसियाको सबैभन्दा अग्लो नीरिक्षण डेक पनि हुनेछ ।
यो भवनको डिजाइनले मलेसियाली स्वतन्त्रता नायक अब्दुल रहमानको त्यस छवीलाई उजागर गर्नेछ जसले हात उठाएर मर्डेका भनेका थिए । रहमानले सन् १९५७ मा मलेसियालाई स्वतन्त्र घोषणा गरेका थिए । एजेन्सीको सहयोगमा
पिण्डदान गर्न भारत पुग्ने नेपालीहरु ठगिँदै
भारतको एउटा त्यस्तो रुख जसले सिंगो गाउँभरी सबैलाई अन्धो बनाईदियो
केही उत्कृष्ट उत्प्रेरक भनाईहरू, जसले तपाईको जिवनमा आमुल परिर्वतन ल्याउन सक्छ
चिहानमा सँगै गाडिएका यी एक जोडी कङ्कालले प्राचीन भारतबारे खोलेका रहस्य
‘सेक्स’ गर ‘फ्रि’ मा कोठा बस !
आजदेखि ३ दिनसम्म वर्षा र हिमपात